Nezvedu - Wenzhou Charmhome Electronic Technology Co., Ltd.
CharmhomeZvigadzirwa zvedu zvinosanganisira kuchenesa kwemuromo, kukwiza muviri, kudzoreredza kufamba uye zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi zvemagetsi. Isu tine timu yehunyanzvi yematarenda ari kubuda ane hupfumi ruzivo rwekuvandudza uye hunyanzvi hwekuvandudza hunyanzvi, shandisa iyo AI tekinoroji uye yakabatsira iyo hombe kudyara kugadzira akawanda akateedzana zvigadzirwa zvine yakazara patent dziviriro mumakore apfuura.
Charmhome yakatenderwa zvitupa, senge ISO9001, CE, RoHS, FDA, FCC. Parizvino, isu tine akawanda emazuva ano mitsara yekugadzira yezvigadzirwa zvemagetsi muChina. Isu tinogara tichitevedzera kune manejimendi pfungwa yevanhu-yakatarisana, yesainzi uye chaiyo, mhando yekutanga. Kwatiri, kunzwa kwakanaka uye kukosha-kuwedzerwa kuongororwa kubva kune vatengi ndiko kutsvaga kwedu tsika dzakanaka.
Sekambani iri kuwedzera, Charmhome iri kuvandudza iyo yega mhando, gamuchirawo kubatana pamwe neOEM & ODM chirongwa. Isu tinoteera pfungwa yekushandira vatengi zvakananga, takatumira zvigadzirwa zvedu kune nyika zhinji kuburikidza neAlibaba, Amazon, Lazada nezvimwe zvichitevera zvimiro zvekushandira vatengi, zvigadzirwa zveCharmhome zvakazivikanwa zvakanyanya nevatengi vekumba nekune dzimwe nyika munguva pfupi.
Charmhome timu inotevedzera kune tenet yemubatanidzwa wechokwadi uye kuumba kumberi, edza nepakanakisisa kuita kuti zvigadzirwa zvive zvezuva nezuva zvinodiwa kune vanhuwo zvavo.Tinogamuchirwa kuti titore kambani yedu uye titsvage kuhwina-kuhwina kubatana.